Ike China - Ngosipụta ike nke Asia na Pacific na Ngosipụta Teknụzụ 2021
Workplace Health & Safety Show will be held in Sydney Showground, Sydney, Australia
Ike China - Asia-Pacific ike ngwaahịa na nka nka ngosi 2021
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://www.bspexpo.com/index.php?lang=en
Categories: Eletriki & Eletrọniki, Renewable Energy, eletrik, Ike & Ike
Ahịa ike na-enye ndị China na-eto eto!
Ministri nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ ozi nke China na-ebu amụma na ahịa ọkụ ọkụ nke mba ahụ ga-eto site na ijeri yuan 232.1 na 2017 gaa na 257.6 ijeri yuan ọzọ na 2022. smart ike grid, smart n'ichepụta, EVs, elu-ọgwụgwụ akụrụngwa, IT, aerospace, mba agbachitere, biotechnology na wdg.
Gini mere iji bia ike China?
Akwadoro site na National Conservation Center, China Energy Conservation Association (CECA), Guangdong Energy Conservation Association, Guangdong Lighting Association na wdg, a na-atụ anya na China China 2020 ga-anabata ndị ngosi ngosi 350 kachasị elu na ụlọ ngosi 20,000 sq.m.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị gosipụtara na Power China enweela nke ọma ịgbasawanye netwọkụ nke kọntaktị azụmaahịa ha wee banye na ahịa ọhụrụ, gụnyere Schneider Electric (France), Sendon (Canada), Deevan (Taiwan, China), Powered, Ruiba, Kulkee Power, Dongwen, Datong Elektrọnik, Super Eagle Tech, BoltPower, Hongba, Huaxin, wdg.
Kedu ihe ọzọ, nke a ghọtara n'ọtụtụ ebe dị ka ikpo okwu na-emepụta ike ngwaahịa ike, ihe ngosi ahụ adọtala ọtụtụ ụdị dị ka ndị na-azụ ya maka afọ ole na ole gara aga, dị ka Huawei, Sungrow, Kstar, Emerson, Meanwell, Siemens, Growatt, Eastups, na ndị ọzọ. , yana ndị ọbịa si mba ụwa si US, UK, Netherlands, Brazil, India, Africa, Russia, Pakistan, na obodo na mpaghara ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ nkwado mmekọrịta azụmahịa, Power China bụ nhọrọ amamihe dị na ya. Naanị sonyere anyị ugbu a! Anyị na-atụ anya ọbịbịa gị.
Shinyong Ọnwa 4 ọnwa iri na otu
Achọrọ m isonye expo
Ọ ga-amasị m isonye na expo.
Enwere m mmasị na usoro nchekwa eco friendly.
Ana m arụ ọrụ na Korea
Enwere m ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara elektrọnik sistemụ enyi na enyi?
Ike expo na china M na-atụ anya sistem.
Usoro ike dị ezigbo mkpa na ụgbọ ala EV.
Enwere m mmasị na sistemụ ike ụgbọ ala EV.
Ike usoro expo m sonyeere ihe ngosi.
Expo Achọrọ m ịga ebe ahụ.
Achọrọ m ịrụ ọrụ helpfully, Soro expo.
Ọ ga-amasị m ileta china.
Ike dị ezigbo mkpa na ndụ anyị.
Plz kpọọ m.
Kehinde Kayode Ọnwa 4 ọnwa iri na otu
Ana m atụ anya ịga ihe ngosi ahụ n'ịntanetị
Nzukọ Mba - Netiama Ntanetị
EP / Ọdụdọ China
Izu Uru Europe
Ngosi mba ofesi na eletriki akụrụngwa na teknụzụ (EP Shanghai)
BLR Milan Milan